merolagani - गरिब र मध्यम वर्गलाई झन् गरिब बनाइरहेकाे झुठबारे ज्ञान दिने 'फेकः फेक मनि, फेक टिचर्स, फेक एसेट्स' काे पुस्तक सारंश भाग ८
Dec 30, 2020 07:04 PM Merolagani
हरेक बुधबार अर्थसँग सम्बन्धित पुस्तकहरुको सारंश प्रस्तुत गर्ने क्रममा अघिल्लाे साता हामीले फेकः फेक मनि, फेक टिचर्स, फेक एसेट्स पुस्तक सारंशकाे साताैँ प्रस्तुत गरेका थियाैँ। यस पुस्तकलाई रोबर्ट काओसाकीले लेखेका हुन्। शुरु गरौँ पुस्तक सारंशको आठाैँ भागः
व्यवसाय र रियल स्टेट
व्यवसाय र रियल स्टेटको समस्या भनेको यिनीहरु तरल छैन। यदि तपाईले गल्ती गर्नुभयो भने, तपाई टाइटानिकको कप्तान बन्नुहुन्छ।
रियल स्टेटमा लगानी गर्न लेखक पहिला त्यससम्बन्धि कोर्ष गर्न सुझाउँछन्, त्यसपछि, सानोबाट शुरु गर्नुहोस्, उच्च वर्गको शिक्षकहरुलाई फलो गर्नुहोस्, र अभ्यास गर्नुस्, अभ्यास, अभ्यास। धेरै सम्पत्तीको लागि म्याकडोनाल्डसलाई फलो गर्नुस्। म्याकडोनल्डस कुन व्यवसायमा छन्? ह्यामबर्गर होइन, उसको व्यवसाय रियल स्टेट हो। म्याकडोनल्डको फर्मुला यस्तो देखिन्छः
यदि कुनै मानिस धनी बन्न चाहन्छ भने, उनीहरुले आफ्नो सोच र बोलीमा प्रयोग हुने शब्दमा नियन्त्रण गर्न सिक्नुपर्छ। अधिकांश मानिसहरु उनीहरुले जे सोच्छन् र बोल्छन्, त्यसले नै उनीहरुलाई गरिब बनाउँछ र बनाइराख्छ।
गरिब भन्छन्, ‘म किन्न गर्न सक्दिन।’ धनी भन्छ, ‘म कसरी किन्न सक्छु?’
गरिब भन्छन्, ‘मलाई पैसामा कुनै चासो छैन।’ धनी भन्छन्, ‘यदि तिमीलाई पैसामा चासो छैन भने पैसालाई पनि तपाईमा कुनै चासो हुँदैन।’
गरिब भन्छन्, ‘म कहिल्यै पनि धनी हुन सक्दिन।’ धनी भन्छन्, ‘म धनी बन्नुपर्छ।’
सम्पत्ती भर्सेस दायित्व
रिच ड्याडको सम्पत्तीको परिभाषाः ‘सम्पत्तीले तपाईको खल्तीमा पैसा हाल्छ।’ त्यसैगरी, रिच ड्याडको दायित्वको परिभाषाः ‘दायित्वले तपाईको खल्तीबाट पैसा झिक्छ।’
एउटा घर सम्पत्ती पनि हुन सक्छ, दायित्व पनि हुन सक्छ। यो सबै कुन दिशामा क्यासफ्लो हुन्छ, त्यसमा निर्भर हुन्छ।
फेक एसेट्स वास्तविक दायित्व हुन्
करोडौँ मानिसहरु फेक एसेट्समा लगानी गर्छन्। एक ४०१ (के) एक फेक एसेट्स हो किनभने त्यसले वर्षौँसम्म तपाईको खल्तीबाट पैसा निकालिरहन्छ। एक व्यक्तिगत रिटायरमेन्ट खाता पनि एक फेक एसेट्स हो किनभने यसले पनि तपाईको खल्तीबाट पैसा निकालिरहन्छ।
सरकारको पेन्सन एक फेक एसेट् हो किनभने त्यसले तपाईको खल्तीबाट पैसा निकालिरहन्छ। म्युचुअल फण्ड एक फेक एसेट् हो। त्यस्तै, स्टक, बण्ड, इटिएफहरु र सेभिङ्ग पनि। यी सबै डेरिभेटिभ हुन्। म्युचुअल फण्डहरु फिहरुले भरिएका हुन्छन्, फि ले धनीलाई अझ धनी बनाउँछ र तपाईलाई गरिब।
भित्रकाहरुलाई थाहा छ, म्युचुअल फण्ड लगानीकर्ताहरुले शतप्रतिशत पैसा लगानी गर्छन्, शतप्रतिशत नै जोखिम लिन्छन् तरपनि २० प्रतिशतभन्दा कम नाफा कमाउछन्।
अध्याय १५ः मेरो पैसा कसले लियोः कसरी, रिटायरमेन्ट, पेन्सन र फेक एसेटहरुले गरिब र मध्यम वर्गीयलाई गरिब बनाइरहेका हुन्छन्?
सन् २००८ देखि, विश्व अर्थतन्त्रलाई जोगाउन ४ ठूला सेन्ट्रल बैंकहरुले ९ त्रिलियन डलर छापे। त्यो सबै पैसा कहाँ गयो? त्यो पैसा कसले पायो? तपाईले पाउनु भयो? र किन धेरै पेन्सन योजनाहरु असफल हुन्छन्?
विश्व अर्थतन्त्रलाई त्रास
बलियो युएस डलर
गरिब र मध्यम वर्गले गुमाउनुका ५ कारण
कारण १ः जुवाडेहरु क्यासिनो चलाउछन्
सन् १९५० र ६० को दशकमा, जुवाडेहरु मात्र स्टक मार्केटमा लगानी गर्थे। त्यतीखेर वित्तीय सल्लाहकारका लागि शेयरहरुको सिफारिस गर्न अनैतिक मानिन्थ्यो।
सन् दशकमा, लेखकका पोर ड्याड र रिच ड्याड बचतकर्ता थिए। स्टक मार्केटमा लगानी गर्नुभन्दा पैसा जम्मा गर्नु बढी सुरक्षित थियो किनभने सन् १९४४ को ब्रीटन उड्स सम्झौतापछि, युएस डलरलाई सुनले टेवा दियो। युएस डलर विश्वको रिजर्भ मुद्रा बन्यो, अर्थात ‘सुनजस्तो राम्रो’।
सन् १९७१मा, निक्सनले सुनको मापदण्डमा अन्तिम कील राख। डलर र सरकारी पैसा सबै ऋण बने। जुवाडेहरुले सरकारी क्यासिनोहरु कब्जा गरे। ऋणीहरु विजेता भए र बचतकर्ताहरु हारे।
ऋणलाई सम्पत्ती प्राप्त गर्न प्रयोग गर्नुहोस्। पैसा छाप्नुले काम गर्ने गरिब तथा मध्यम वर्गीयहरुलाई गरिब बनाउँछ किनभने फेक पैसाले मुद्रास्फिती बढाउँछ र मुद्रस्फितीले जीवन महँगो बनाउँछ।
हाउस अफ कार्ड कोल्याप्स
१९९८ मा, विश्वव्यापी केन्द्रिय बैंक र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारले आफ्ना साथीहरुलाई बचाउनका लागि करिब ९ त्रिलियन डलर पैसा छाप्यो।
सन् २०१८ मा, विश्व पुन अर्को ठूलो बबलमा पर्यो। स्टक, बण्ड र रियल स्टेटबाट जुवाडेहरुले करोडौँ कमाए र धनी बने।
१९७१ र २०१८ को बीचमा, जुवाडेहरु नै विजेता थिए। गरिब तथा मध्यम वर्गीय श्रमिकहरु जो फेक मनि कमाउन कडा मेहेनत गर्छन्, फेक मनि बचाउँछन् र त्यही पैसा हाम्रो सबैभन्दा राम्रो विजनेश स्कुलमा अध्ययन गरेका फेक फण्ड म्यानेजरहरुद्वारा सञ्चालित फेक सम्पत्तीमा लगानी गरेका थिए, उनीहरु सबैभन्दा ठूला लुजर बने।
३ ठूला बबलः
बबल नम्बर १ः १९९८ः थाइल्याण्ड बस्ट, १९९९ः लङ्ग टर्म क्यापिटल म्यानेजमेन्ट बस्ट, २०००ः डट कम बस्ट
बबल नम्बर २ः २००८ः रियल स्टेट डेरिभेटिभ बस्ट
बबल नम्बर ३ः बबल टप वर्ष?
लेखक शंका गर्छन्, २०१९ देखि २०२५ सम्ममा जति पनि नयाँ जुवाडेहरु जो अहिले धनी छन्, उनीहरु भोलि सबैभन्दा ठूला हारेका व्यक्ति हुन सक्छन्। त्यसोभए के यो जुवाडेहरुको सुनौलो युगको अन्त्य हुँदैछ?
उनको भनाइ अनुसार, जुवाः कुनै चिजको लागि केही नपाउने निश्चित तरिका।
अब इन्टरनेटबाटै घरजग्गाको नक्सा हेर्न र प्रिन्ट गर्न सकिने, नापी विभागले सुरु गर्यो ‘मेरो कित्ता’ सेवा
अब घरमै बसी बसी इन्टरनेटबाटै घर अथवा जग्गाको नक्सा हेर्न र प्रिन्ट गर्न सकिने मिल्ने भएको छ ।नापी विभागले आज अर्थात बिहिबारदेखि यो सेवा लागू गर्ने भएको हो ।
प्रि ओपन सेसन अपडेटः साढे २० अंक बढ्यो नेप्से
स्मार्ट जमानामा स्मार्ट पढाई, ‘पढाईको नयाँ फण्डा–मेरोस्कुल’ सार्वजनिक
Apr 15, 2021 08:42 AM
भद्रगोल फ्रिक्वेन्सीलाई व्यवस्थित गर्न ‘स्ट्राटेजीक प्लान’ बनाउने सरकारको तयारी
Apr 15, 2021 08:03 AM
अन्तर बैक व्याज दर ४ प्रतिशत, तरलता ३४ अर्ब, सिसिडि टाइट तर बैंकहरूले किन घटाए बैशाखका लागि ब्याजदर ? यस्तो छ कारण
Apr 14, 2021 08:15 PM